Hargaysa: 3 Caruura Oo Ku Geeriyooday Shil Gaadhi | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa: 3 Caruura Oo Ku Geeriyooday Shil Gaadhi
Published on June 10, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Saddex caruur ah oo walaalo ahaa ayaa ku geeriyooday shil baabuur oo maanta ka dhacay duleedka koonfureed ee magaaladda Hargaysa, kuwaasoo la sheegay in saddexduba walaalo ahaayeen.
Saddexdan caruurta ahaa ayaa la sheegay in gaadhigu ku jiidhay meel u dhaw gurigoodda oo ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha Hargaysa, iyadoo baabuurkii shilka gaystay iyo derawalkii wadayba ay gacanta ku hayaan ciidamadda nabadgelyadda wadooyinka.
C/laahi Saleebaan, oo ah aabaha dhalay saddexda caruura ee baabuurku jiidhay ayaa ka hadlay sida shilku u dhacay. Waxaanu yidhi “Anigu ma joogin marka shilku dhacay, saddexda caruurra guriga ayaan kaga tegay iyagoo nabad qaba. Kadib-na markii aan suuqa imid ayaa la ii soo sheegay in ay saddexdiiba dhinteen, oo maydkooda cusbitaalka la keenay”.
Sidoo kale aabaha caruurta baabuurku jiidhay dhalay waxa uu tilmaamay in aanu isagu guriga joogin xiliga caruurtiisa baabuurku jiidhay.
“Cusbitaalka ayaan ugu imid, iyadoo mid ay naftu ku sii jirto ayaan ku soo gaadhay. Ilaa hadda anigu ma hubo sida shilku u dhacay, laakiin waxaa la ii sheegay in uu ku jiidhay agagaarka xaafadda Masalaha.
Caruurta gabadha ugu weynayd 20 jir ayay ahayd, midna 15 jir ayuu ahaa, midna 13 jir ayuu ahaa” ayuu yidhi C/laahi Saleebaan abaaha dhalay caruurta shilka gaadhi ku geeriyooday.